Inaad si dhow u eegto Heerarka Codaynta WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Inaad si dhow u eegto Heerarka Codaynta WordPress
Inaad si dhow u eegto Heerarka Codaynta WordPress
Marka loo eego W3tech, 65.1% mareegaha adeegsada nidaamka maaraynta nuxurka waxay ku shaqeeyaan WordPress. Waa il furan oo CMS ah oo caan ah oo ku qoran luqadda PHP. Sababtoo ah noocyada kala duwan ee mawduucyada gaarka ah iyo plugins, bixiyeyaasha SaaS badan iyo wakaaladaha suuq-geynta dhijitaalka ah ayaa isticmaala WordPress si ay u abuuraan mareegaha.
Waa maxay sababta WordPress u soo bandhigtay Heerarka Codaynta?
Maadaama WordPress uu yahay software il furan oo ballaaran, wuxuu ka kooban yahay kood kood weyn oo lagu socodsiiyo. Tan waxa u sabab ah wax ku biirinta dhowr horumariye ilaa maantadan. Sida kood u samaynta lagu samayn karo qaabab badan, horumariyayaashu waxay ku dari karaan nooc kasta oo kood ah oo ay yaqaanaan madal WordPress ah. Tani waxay keeni kartaa dhibaatooyin ku yimaada WordPress.
Haddii qaabab codeedyo badan lagu fuliyo koodhka isha ee WordPress, kakan waxa ay noqon doontaa soosaarayaasha software ee kala duwan si ay u akhriyaan oo u kordhiyaan codsiyada software-ka. Shaqaalaha DevOps iyaga oo isticmaalaya qaabab kood kala duwan ayay ku adkaan doontaa in la aqoonsado khaladaadka. Tani waxay keeni kartaa in mareegaha internetka ay burburaan wakhtiga la furayo, taas oo keeni karta waxyeelo xagga lumitaanka macaamiisha ganacsiyada.
Si looga hortago duruufahaas oo kale, WordPress waxa ay soo bandhigtay jaangooyooyin kood samaynta. Kuwani waxay ahaayeen xeerar fara badan oo ku khasban horumariyayaashu inay raacaan marka la kordhinayo shaqada WordPress.
Heerarka codaynta waxay fududeeyaan habka maaraynta iyo qiimaynta mugga muunadaha koodka. Tani waa sababta oo ah waxay raacaan qaabab isku mid ah qaabaynta, taasoo u sahlaysa horumarinta kala duwan inay fahmaan waxa ka dhacaya koodka isha. Guud ahaan, halbeegyada codaynta ayaa gacan ka geysta ilaalinta tayada koodka isha ee ay ku biiriyaan horumariyeyaasha kale.
Waa maxay Heerarka Codaynta ee WordPress Isticmaalaa?
1. Ku codaynta PHP
Wax ku biirinta lebiska, nadiifka ah, iyo kood la fahmi karo, WordPress wuxuu soo bandhigay jaangooyooyin kood samaynta PHP. Haddii aad samaynayso wax mashruuc ah oo WordPress ah iyada oo loo marayo calaamadaynta PHP, raac xeerarka codaynta ee soo socda.
WordPress waxa ay ku talinaysaa in la isticmaalo calamadaha xigashada labanlaab iyo hal mar xaaladaha ku haboon. Xigashooyinka kelida ah ayaa lagu isticmaali karaa gudaha xadhig marka aan waxba la qiimayn. Markaad isticmaalayso calamadaha xigashada, meel dhig hal qaab oraaheed si aad ugu isticmaashid xarigga dhexdiisa iyo kan kale si aad ugu xirto dhammaan xarigga.
Ka baxsashada oraahyada xargaha laguma dhiirigeliyo.
Markaad isticmaalayso indho-indhayn, WordPress wuxuu xooga saarayaa adeegsiga furayaasha tab halkii ay ka ahaan lahayd furayaasha bannaan ee tilmaamaya khadadka koodka ee goglan. Faa'iidada tani waa in koodhkaagu uu noqdo mid la jaan qaadaya tifaftirayaasha kala duwan ee ku isticmaalaya meelo kala duwan.
Indenting-ku wuxuu caawiyaa meelaha macquulka ah ee koodkaagu inuu soo baxo, taasoo ka dhigaysa mid cad oo la fahmi karo
Haddii aad isticmaalayso arrays associative oo ay ka kooban tahay shay badan, shay kasta oo ka mid ah shaxdaas waa inuu lahaadaa khad cusub oo u gaar ah. Dhammaadka shayga ugu dambeeya ee shaxdaada, ku dar hakad. Tani waxay sahlaysaa in lagu daro walxo cusub oo lagu soo daro shaxanka ama in la beddelo nidaamkeeda.
Markaad isticmaalayso qaybo ka mid ah koodhka PHP ee blocks HTML, PHP tags furan iyo mid dhow waa inay ku jiraan khad gooni ah keligood.
WordPress wuxuu mamnuucay isticmaalka gaaban ee PHP tags sababtoo ah waxay keeni karaan dhibaatooyin marka ay socodsiinayaan code-kaaga.
WordPress wuxuu ka dhigayaa mid ku qasban in lagu isticmaalo koodka xidhmooyinka. Caleemaha furitaanka waa in la dhigaa laynka bayaanka bilowga. Biriishyada waxaa looga tagay oo keliya odhaahyada sadarka ah. Odhaahyada loop sidoo kale waa in ay ku jiraan biraha. Haddii bayaannada is-hortaagga badan la isticmaalo, ka-taabashada waa lagama maarmaan.
Meel bannaan waa in lagu dhejiyaa labada dhinac ee hawsha, macquulka ah, isbarbardhigga, iyo hawlwadeenada xargaha iyo ka dib hakadyada. Booska waa in sidoo kale la dhigaa ka dib furitaanka iyo ka hor xiritaanka qawlka, marka laga reebo qalabka wax lagu duubo. Goobaha cad ee ku xiga dhamaadka sadar kasta waa in la tirtiraa.
Heerarka codaynta WordPress waxay dhiirigeliyaan in weedhaha SQL lagu qoro far waaweyn. Odhaahyadan waxa lagu qori karaa hal sadar ilaa inta ay gaaban yihiin oo ay fududahay in la akhriyo. Weydiimaha adag ee SQL, waxay ku talinaysaa in loo qaybiyo sadar badan, iyada oo la gelinayo bayaan kasta oo SQL ah.
Horumarinta ayaa looga baahan yahay inay raacaan qawaaniinta WordPress marka ay magacaabayaan shaqooyinka, fasalada, iyo faylasha si looga hortago khaladaadka qallafsan. Marka la abuurayo hawlo ama doorsoomayaal, magacyada waa in lagu qoraa far yar, Case geel waa mamnuuc. Haddii erayo badan la isticmaalo marka la magacaabayo, ku kala saar hoosta.
Si la mid ah waa kiiska magacyada faylalka, marka laga reebo in haddii kelmado badan la isticmaalo, waa in lagu kala saaraa calaamad. Haddii faylkaagu ka kooban yahay fasal, markaa magaca faylka waa in lagu qoraa qaabka fasalka-magaca fasalka hoose oo hoosta hoose lagu beddelayo xaraf.
Haddii faylasha ka kooban summada template-ka la akhrinayo ama lagu daro galka wp-ku jira,-template waa in lagu lifaaqaa magaca faylkaas.
Marka la abuurayo fasalada, magacyada fasalka waa in la weyneeyaa. Haddii erayo badan la isticmaalo, waa in lagu kala saaraa hoosta, oo kelmad kastaa waxay u baahan tahay in la weyneeyo.
2. Ku codaynta HTML
Xeerarka codaynta ayaa sheegaya in qaybo ka mid ah koodhka HTML ay tahay in la dhex mariyo saxiyaha W3C ka hor inta aan la hubin gacanta koodka. Tani waxay kaa caawinaysaa in la ogaado oo la saxo wixii khalad ah ee calaamadaynta koodka. Heerarkan soo socda waa in la raaco marka lagu darayo codeeynta HTML.
Calaamadaha is-xiridda ee HTML waxay u baahan yihiin in si taxadar leh loo maareeyo, gaar ahaan kala dheereynta. W3C waxa ay ina faraysaa in boosku uu ka horeeyo is-xididada hore ee is-xidida marka la isticmaalayo summada is-xiridda.
Tags iyo Sifooyin
Calaamaduhu waxay caawiyaan qaabaynta qaab dhismeedka bogga HTML. Waxay ku hareeraysan yihiin shabakada waxayna awood u siiyaan browserka inuu go'aamiyo nooca nuxurka ay tahay. Sifooyinku waxay bixiyaan tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan curiyayaasha HTML.
Xeerarka codaynta WordPress waxay ku talinayaan in dhammaan tagyada HTML iyo sifooyinka ay tahay in lagu qoro far yar. Qiimaha sifo waa in sidoo kale lagu qoraa far yar si loo tarjumo mashiinka. Marka laga hadlayo samaynta xogta dadku akhriyi karo, weynaynta saxda ah ayaa la isticmaali karaa.
Calaamadaha xigashada laba jeer ama hal keliya ayaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo marka lagu qorayo qiyamka sifada ee XHTML. Heerarka codaynta WordPress ee HTML waxay ku talinayaan qaab isku mid ah si looga hortago wax kasta oo amniga ah oo ku jira koodka HTML.
3. Ku codaynta CSS
CSS waa luuqad kale oo muhiim ah oo barnaamijka loogu talagalay naqshadaynta qaabka iyo mawduuca boggaga internetka. WordPress waxa uu soo bandhigay halbeegyada codaynta ee CSS si ay horumariyayaashu u sameeyaan kood joogto ah, nadiif ah, oo la akhriyi karo mashaariicda. Waa kuwan tilmaamaha lagu taliyay.
CSS waxa ay ku siinaysaa fursado badan oo loogu samaynayo xaashida qaabkaaga. Si kastaba ha noqotee, WordPress wuxuu bixiyaa tilmaamo aasaasi ah oo ku jira CSS si loo sameeyo kood cad oo kala duwan. Tani waxay ka caawinaysaa horumariyayaasha kale inay kula kaashadaan si ay u fahmaan socodka dukumeentigaaga.
Tilmaamuhu wuxuu kugula talinayaa in la isticmaalo tabs si loo geliyo hanti kasta oo lagu isticmaalo koodka. Xirmooyinka koodka ee isla qayb ka tirsan waa inay lahaadaan hal meel oo bannaan oo u dhaxaysa baloog kasta. Kala soocida qaybaha kood-samaynta, 2 xariiq oo maran waa in lagu daraa inta u dhaxaysa qayb kasta oo kood.
Haddii aad liis gareynayso doorashado badan hal xeer, doore kasta waa in lagu qoraa xariiq gooni ah. Lammaanaha qiimaha hantida, mid walbaa waa inuu lahaado xariiq u gaar ah, isticmaal hal tabo oo galmood ah, oo uu ku dhammeeyo hal-koob. Marka la isticmaalayo hal dooriye oo keliya, xidhidh furan waa in la dhigaa laynka dooriyahaas.
Haddii kale, xargaha furitaanka waa in lagu daraa xariiqda ugu dambeysa ee xulashada, iyo xirida xiritaanka waa in lagu dhejiyaa xariiq gooni ah oo la mid ah dhexgalka xulashada furitaanka.
Heerarka codaynta ee xulayaasha waxay la mid yihiin halbeegyada codaynta PHP ee magacyada faylalka. Marka la magacaabayo xulayaasha, waa in lagu qoraa far yar, iyo xarafyada waa in la adeegsadaa si loo kala saaro kelmado badan. Isticmaalka Dacwad geela iyo hoosta ka xariiqda waa mamnuuc.
Magacyada doorashadu waa inay awoodaan inay sharraxaad kooban ka bixiyaan waxyaabaha ay qaabeeyaan. Magacyadani waa inay ahaadaan kuwo dadku akhriyi karo. Xulashooyinka sifada, laba-xigashooyinka waa in lagu dhejiyaa agagaarka qiyamkooda.
WordPress wuxuu niyad-jabiyaa isticmaalka sifooyin gaar ah oo sababi kara dabacsanaanta naqshadeynta inay hoos u dhacdo. Halbeeggeeda codayntu waxay ku talinaysaa in hanti kasta ay u baahan tahay inay raacdo xiidan iyo meel bannaan.
Guryaha iyo qiyamka waa in lagu qoraa far yar, marka laga reebo magacyada xarfaha. Ku darida midabada, hex codes ama rgba() ayaa la door bidayaa, iyo xarfaha yaryar waa in la isticmaalo. Isticmaalka guryaha gacan-gaaban waxa lagula talinayaa sooyaalka, xuduudka, farta, liiska-qaabka, margin, iyo qiimayaasha suufka.
Xeerka Isha Dib-u-habaynta
WordPress waxa ay ku talinaysaa in si haboon loo isticmaalo kala fogaanshaha si loo wanaajiyo akhrinta koodhka ishaada, taas oo ka dhigaysa mid loo habeeyay daalacashada si ay u farsameeyaan.
Xeerarka codaynta waxay taageerayaan tab in loo isticmaalo soo gelid. Meesha cad waa in lagu tirtiraa khadadka maran iyo dhamaadka xariiqyada. Sadar kasta oo kood ah waa in aanu dhaafin 80 xaraf. Biriishyada waa in loo adeegsadaa haddii/la tijaabiyo baloogyo waana in lagu galaa khadad badan.
Ujeeddada halbeegyada codaynta ayaa ah in laga caawiyo horumariyayaasha inay sameystaan ​​kood la akhriyi karo. Sida nadiifka ah ee koodku u ekaado, way u fududahay dadka kale inay fahmaan oo hirgeliyaan. WordPress waa codsi il furan oo lagu taageeray wax ku biirinta bulshada sii kordheysa ee taageerayaasha.
Markaa, marka aad abuurayso mashruucaaga WordPress, xasuusnoow inaad raacdo xeerarka codaynta si aad gacan uga geysato codayn tayo leh.
Todobaadka Cyber ​​waxaa laga yaabaa in uu fursad siinayo Bisha Cyber, sida uu qabo Adobe
Sida loo beddelo midabka farta HTML